January 2017 ~ Htet Aung Kyaw
12:13 PM Htet Aung Kyaw No comments
ILLIBERAL DEMOCRACY IN AMERICA
Posted by Fareed Zakaria on December 30, 2016 · LeaveaComment
ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ ​ငွေ​ကြေး​အလွဲသုံး​စား​မှုနှင့်​ စပ်လျဉ်း​၍ သတင်း​ထုတ်ပြန်ချက်။
(Facebook မီမုိုရီမှာပြန်ပေါ်လာလုို့ မှတ်တမ်းအဖြစ် ပြန်ရှယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်)။
၁။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ ပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​ကို ဦး​ဆောင်သူများ​က လုပ်ငန်း​အတွက် သတ်မှတ်​ပေး​ထား​သော အဖွဲ့​အစည်း​ပိုင် ​ငွေများ​ကို အလွဲသုံး​စား​ပြုလုပ်​နေ​ကြောင်း​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ အုပ်ချုပ်​ရေး​ တာဝန်ရှိသူများ​ဖြစ်သည့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​နှင့်​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​တို့​က အ​ထောက်အထား​အခိုင်အမာ ​တွေ့​ရှိခဲ့​သည်။ ​ငွေ​ကြေး​စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​ အပါအဝင် မြန်မာပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​ကို ဦး​ဆောင်တာဝန်ယူသူ ဦးမျိုး​မင်း​နိုင် (အမည်ခွဲများ​- ကို​နေထွန်း​၊​ ကိုနန္ဒ၊​ ကိုမျိုး​ကြီး​) နှင့်​ ဦး​အောင်မျိုး​ကျော် (အမည်ခွဲများ​- ပွကြီး​၊​ အရှည်​လေး​) တို့​နှစ်ဦး​သည် မမှန်ကန်​သော ​ငွေစာရင်း​များ​တင်ပြကာ ပုဂ္ဂိုလ်​ရေး​ အကျိုး​စီး​ပွား​အတွက် အဖွဲ့​ပိုင်​ငွေ​ကြေး​များ​ကို မတရား​ရယူ​နေ​ကြောင်း​ သက်​သေ အ​ထောက်အထား​များ​အရ သိရသည်။ ထို့​ကြောင့်​ ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလက ထို​ငွေ​ကြေး​အလွဲသုံး​စား​မှုကို အုပ်ချုပ်​ရေး​ တာဝန်ရှိသူများ​က ဘုတ်အဖွဲ့​သို့​တင်ပြခဲ့​သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုတ်အဖွဲ့​က အဆိုပါ ​ငွေ​ကြေး​အလွဲသုံး​စား​မှုကို တာဝန်ယူ စုံစမ်း​ဖော်ထုတ်ခဲ့​သည်။
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဘန်ကောက်မြို့ နေအိမ်
၂။ လွတ်လပ်၍ သမာသမတ်ကျ​သော စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှုကို ဦး​တည်​သောအား​ဖြင့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်နှင့်​ လက်​ထောက် ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​တို့​သည် စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှု ပြီး​သည်အထိ စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​တာဝန်မှ ယာယီရပ်နား​ပြီး​ အသံလွှင့်​လုပ်ငန်း​ပိုင်း​ကိုသာ တာဝန်ယူခဲ့​သည်။ ထိုကာလအတွင်း​ ဒီဗွီဘီ စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​ကို တာဝန်ယူရန် ယာယီ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​မှူး​အဖြစ် ဦး​ဟန်​ညောင်​ရွှေနှင့်​ ယာယီရုံး​အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​အဖြစ် Ms. Vibeke Hermanrud တို့​ကို ခန့်​အပ်တာဝန်​ပေး​ခဲ့​သည်။
၃။ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှုပြုလုပ်ရန် Price waterhouse Coopers (PwC) ကို ငှား​ရမ်း​ခဲ့​သည်။ ​နော်​ဝေး​ နိုင်ငံနှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံတို့​တွင် အ​ခြေစိုက်​သော PwC ရုံး​ခွဲများ​မှ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​ ​ခြောက်ဦး​သည် ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်း​မှစ၍ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။ ​အော်စလိုမြို့​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ ရုံး​ချုပ်ရှိ ဝန်ထမ်း​များ​ကို ပထမ​မေး​မြန်း​ပြီး​ ​ငွေစာရင်း​များ​၊​ သက်​သေ အ​ထောက်အထား​များ​ကို စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။ ​နော်​ဝေး​ PwC ရုံး​မှ စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​နှစ်ဦး​နှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံ PwC ရုံး​မှ စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​ တဦး​တို့​က နိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်း​တွင် ထိုင်း​နိုင်ငံအတွင်း​ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။
၄။ ယခုအခါ PwC က ၎င်းတို့​စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ ​တွေ့​ရှိချက်များ​ကို အစီရင်ခံစာ ​ရေး​သား​ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဓိက ​တွေ့​ရှိချက်များ​ထဲတွင် ​အောက်ပါအချက်များ​ ပါဝင်သည်။
(က) ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ၏ ပြည်တွင်း​ သတင်း​လုပ်ငန်း​ ကွန်ရက်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် တည်​ထောင်ချိန်မှစ၍ အခုအချိန်ထိ တာဝန်ယူကြီး​ကြပ်​နေ​သော ​အော်စလိုအ​ခြေစိုက် တာဝန်ခံ ဦးမျိုး​မင်း​နိုင် (အမည်ခွဲများ​- ကို​နေထွန်း​၊​ ကိုနန္ဒ၊​ ကိုမျိုး​ကြီး​) နှင့်​ ပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​အတွက် ​ငွေ​ကြေး​ကို မဲ​ဆောက်မှ ကြီး​ကြပ်သူ ​ဦးအောင်မျိုး​ကျော် (အမည်ခွဲများ​- ပွကြီး​၊​ အရှည်​လေး​) တို့​ နှစ်ဦး​မှာ အလွဲသုံး​စား​လုပ်သူများ​ ဖြစ်​ကြောင်း​ PwC အစီရင်ခံစာ က ​ထောက်ပြထား​သည်။
(ခ) အလွဲသုံး​စား​လုပ်ခဲ့​သည်ဟု PwC က အတည်ပြု​သော ​ငွေပမာဏမှာ ​နော်​ဝေး​ငွေ က​ရောင်း​ ၂,၂၁၈,၁၄၁၊​ (အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာ ၃၆၉,၀၇၅၊​ မြန်မာကျပ် ၃၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ဖြစ်သည်။ အလွဲသုံး​စား​ ပြုလုပ်ခံရ​သော ​ငွေများ​မှာ ပြည်တွင်း​နှင့်​ မဲ​ဆောက်ရုံး​တာဝန်ကျ သတင်း​ထောက်နှင့်​ ဝန်ထမ်း​များ​၏ လစာ​ငွေများ​၊​ ဖမ်း​ဆီး​ခံထား​ရ​သော ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့​အသံ သတင်း​ထောက်များ​၏ မိသား​စုများ​အတွက် ​ပေး​သော ​ထောက်ပံ့​ငွေများ​၊​ ရုံး​ခန်း​ငှား​ခများ​နှင့်​ လုပ်ငန်း​ လည်ပတ်စရိတ်အတွက် သတ်မှတ်​ပေး​ထား​သော ​ငွေများ​ဖြစ်သည်။
(ဂ) အလွဲသုံး​စား​လုပ်၍ စု​ဆောင်း​ရရှိ​သော ​ငွေများ​ဖြင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံနှင့်​ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်များ​၊​ တိုက်ခန်း​များ​၊​ ​မော်​တော်ယာဉ်များ​၊​ ​မြေကွက်များ​ ဝယ်ယူထား​သည့်​အပြင် ​လောင်း​ကစား​နှင့်​ အခြား​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​များ​ကိုလည်း​ လုပ်​ဆောင်​နေသည်။
(ဃ) အကျဉ်း​ထောင်အသီး​သီး​တွင် ​ထောင်ချခံခဲ့​ရသည့်​ ဒီဗွီဘီ သတင်း​ထောက်များ​နှင့်​ မိသား​ဝင်များ​အတွက် ​ထောက်ပံ့​ငွေများ​ကိုအလည်း​ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်ခဲ့​ကြသည်။
၅။ အလွဲသုံး​စား​ငွေများ​ထဲမှ ဘတ်​ငွေ နှစ်သန်း​ခုနစ်သိန်း​ဖြင့်​ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူထား​သော ဘန်​ကောက်မြို့​ရှိ အိမ်တလုံး​ကို ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံက ပြန်လည်သိမ်း​ယူထား​ပြီး​ဖြစ်သည်။ ကျန်​နေ​သေး​သော အထက်​ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း​များ​ကို သိမ်း​ယူနိုင်ရန် ဆက်လက်​ဆောင်ရွက်သွား​မည်။
၆။ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှု စတင်ကတည်း​က ​ဖော်ပြပါ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်သူများ​သည် သူတို့​အ​ပေါ် နိုင်ငံ​ရေး​ လုပ်ကြံမှုဖြစ်​ကြောင်း​ ​ကောလာဟလသတင်း​များ​ လွှင့်​ခဲ့​သည်။ ပြည်တွင်း​သတင်း​ ကွန်ရက်တွင် တာဝန်ထမ်း​ဆောင်​နေ​သော သတင်း​ထောက်များ​နှင့်​ နိုင်ငံ​ရေး​အဖွဲ့​များ​အကြား​ သတင်း​မှား​များ​ ဖြန့်​ချိကာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ အကွဲအပြဲဖြစ်သ​ယောင် လုပ်​ဆောင်​နေသည်။ ၂၀၀၇ ​ရွှေဝါ​ရောင် ​တော်လှန်​ရေး​အတွင်း​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ သတင်း​ထောက်များ​၏ စွန့်​စား​လုပ်​ဆောင်ချက်များ​ကို မှတ်တမ်း​တင်ထား​သည့်​ “Burma VJ” မှတ်တမ်း​တင် ရုပ်ရှင်ကား​ အမည်ကို အသုံး​ပြုပြီး​ Burma VJ Media Network ဟု ​ခေါ်​သော အဖွဲ့​ကို တည်​ထောင်ထား​သည်။ ထို့​အပြင် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံက ထုတ်​ပေး​ထား​သော ပစ္စည်း​ကိရိယာများ​၊​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ မူပိုင်ဖြစ်​သော archive ဗွီဒီယို၊​ ဓာတ်ပုံနှင့်​ အခြား​ အ​ရေး​ကြီး​ သတင်း​အချက်အလက်များ​ကိုလည်း​ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း​မရှိဘဲ သိမ်း​ယူထား​ဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဗွီဘီပိုင် ပစ္စည်း​များ​အား​ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်ထား​ခြင်း​အ​ပေါ် ဆက်လက် အ​ရေး​ယူ​ဆောင်ရွက်သွား​မည်။
၇။ အခက်အခဲများ​စွာကို ရင်ဆိုင်ကာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံတွင် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်း​ဆောင်​နေ​သော ပြည်တွင်း​သတင်း​ကွန်ရက်မှ သတင်း​ထောက်များ​အား​လုံး​ကို ချီး​ကျူး​ဂုဏ်ပြုပါသည်။ အဖြစ်မှန်ကိုသိ၍ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့​အသံနှင့်​ ပြန်လည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်လို​သော ဒီဗွီဘီ သတင်း​ထောက်များ​အား​လုံး​ကို ဖိတ်​ခေါ်ပါသည်။
၈။ ဘုတ်အဖွဲ့​က ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်နှင့်​ ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​တို့​ကို ၎င်းတို့​ယာယီနုတ်ထွက်ထား​သော ရာထူး​များ​ဖြစ်သည့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​နှင့်​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ရာထူး​များ​တွင် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်​နေ့​ကတည်း​က အသီး​သီး​ ပြန်လည်ခန့်​အပ်ထား​ပြီး​ ဖြစ်သည်။
2. Mr. Eirik Vinje, Attorney-at-law, ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ​ရှေ့​နေ၊​ ev@gmco.no, +47 92 88 67 79
3. ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်၊​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​၊​ acn@dvb.no, +47 91107743
4. ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​၊​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​၊​ kmw@dvb.no, +47 45276649
ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်​နေ့​၊​ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ​အော်စလိုမြို့
KIA ဗုိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၂)
1:34 PM Htet Aung Kyaw No comments
19 January 2017 KIA ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် / ဧရာဝတီ
တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ် မရေးထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရတို့ကြား NCA စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ ကျင်းပမယ့် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင်လုံ တို့ကို တက်ရောက်ကြဖို့ရာ အတွက်လည်း အခုအချိန်အထိ မရေရာသေးပါဘူး။
အစိုးရ တပ်မတော်နဲ့ NCA မထိုးရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကြား ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတို့မှာ စစ်ပွဲတွေက ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သလို ထိရောက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် နှစ်ဘက် ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ ထိထိမိမိ မရှိသေးဘူးဆိုတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ် ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော်ကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းငြိမ်း နဲ့ ကျော်ခတို့က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ ဟိုတနေ့က နမ့်ဆန်မှာ TNLA နဲ့ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်တော့ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ကြတယ်။ ကြားထဲမှာ ကလေးတယောက် အပါအဝင် နှစ်ယောက် ဆုံးသွားကြတယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ လူထုကြားထဲမှာ ပြောလာတာရှိတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုက်မှ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး ရမှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေ မေးလာတာတွေ့ပါတယ်။ တကယ်လို့များ အဲဒီလို မေးခွန်းမျိုး ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို မေးလာမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါက ကျနော်တို့ KIO ရဲ့ ပေါ်လစီ ရှိပြီးသားပါ။ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး အမြဲတမ်း စွဲကိုင်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီလောက် တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန်နေပေမယ့် ကျနော်တို့က ဆွေးနွေးပွဲကို လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီမူဝါဒသာ မရှိဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒီမှာလာစရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး။
မေး။ ။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးတွေက ဘာကြောင့် ရှိနေသေးသင့်သလဲလို့ မေးလာခဲ့လို့ရှိရင် ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လို ဖြေချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ တန်းတူရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ် အရေးဖြစ်ပါတယ်။ တန်းတူ ဆက်ဆံဖို့လိုတယ်။ တန်းတူ ဆွေးနွေးဖို့ လိုတယ်။ တန်းတူ အခွင့်အရေးရှိရမယ်။ ပြီးတော့ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲအပေါ် ရောက်ရမယ်။
ဒီစစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲက ရလဒ်တွေကို အခြေခံဥပဒေမှာ တရားဝင် ဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုအခက်အခဲက အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ရေးကို ဘယ်သူမှ စကားမပြောတာက အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အခု ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က အစည်းအဝေးမှာလည်း ကောင်းပြီ၊ ဒါဆို ကျနော်တို့က ချီလီနိုင်ငံလိုမျိုး လုပ်မလား။ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို ၁၅ နှစ်၊ ၁၆ နှစ် လုပ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က အားလုံးပါဝင်ပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလို့ရှိရင် ဒီအခြေခံဥပဒေ ဘယ်လို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲ။ အသစ် ရေးဆွဲမယ့် ကဏ္ဍဍတွေကို ဆွေးနွေး မလားလို့ မနေ့က အဲဒါကို ခေါင်းစဉ် တခုအနေနဲ့ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဖြေတော့ မရပါဘူး။
မေး။ ။ လက်ရှိအစိုးရသစ်က သွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တို့လည်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ မြင်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ အစိုးရသစ်ရဲ့ သွားနေတဲ့ ပုံစံအရဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်တို့အတွက် မှေးမှိန်တဲ့ အပိုင်းကို သွား နေသလား။ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိ အနေအထားအရ မျှော်လင့်ချက် ရှိသေးလား။
ဖြေ။ ။ အစိုးရသစ်မှာ ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်စွမ်း မရှိဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ဥပမာပေါ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ပထမအကြိမ် လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာ အစသွားတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ပြောသလိုပဲ ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ အစိုးရသစ်ကို အလေးထားတဲ့ အနေနဲ့သွားတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ရောက်ချင်လို့ ကျနော်တို့က သွားတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကျေနပ်သလား ဆိုလို့ရှိရင် ၂၁ ရာစု ပထမအကြိမ် ညီလာခံကို ကျနော်တို့ ကျေနပ်မှု မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ တကယ်တမ်း အကောင်အထည် ဖော်တဲ့ အပိုင်းမှာတော့ အားနည်းတယ်လို့ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ မြင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ၂၁ ရာစု ပထမအကြိမ် ညီလာခံကို ကျေနပ်မှု မရှိဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ညီလာခံဆိုရင် ၁၃ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ကျနော့်ဘက်က အဆိုပြုတာ ရှိပါတယ်။ ညီလာခံလို့ ခေါ်မယ် ဆိုရင် ညီလာခံရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂ࿿ါရပ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကျင်းပဖို့လိုပါတယ်။ ပထမအချက်ပေါ့နော်။ ဒုတိယ အချက်ကတော့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံလို့ အမည်မှည့်ခေါ်တယ် ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု အရေး အဓိကထားပြီး ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လုံ ကတိကဝတ်နဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးရမယ်။ တကယ်လို့ ပင်လုံမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ဟာတွေကို အသိအမှတ် မပြုဘဲနဲ့ အဲဒီမှာလည်း မဆွေးနွေးဘူးဆိုရင် ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ပင်လုံဆိုတဲ့ စကားလုံး ဖြုတ်သင့်တယ်။ တခြားနာမည်ပြောင်း သင့်တယ်လို့ မနေ့က အကြံပြုထားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကျနော်တို့ ဘဝင်မကျတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ အစိုးရ လိုချင်တာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ (အပစ်မရပ်သေးသော အဖွဲ့များ) အနေနဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယ အကြိမ်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီး တက်ဖို့ မျှော်လင့်တာပေါ့။ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့က ၂၁ ပင်လုံကို တက်မှာလား။ တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အစိုးရဘက်က ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ နှစ်ပိုင်း ပြောချင်တာပေါ့နော်။ အခု အားလုံးမေးတာကတော့ ၂၁ ရာစုပင်လုံနဲ့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ကိစ္စကို တခုတည်း အနေနဲ့ ပြောနေကြတာပေါ့။ တကယ်တော့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ကိစ္စက သာမန်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ရှေ့ကို တက်လှမ်းရမယ် ဆိုတာ မှန်တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ လက်မှတ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင် ဘယ်လို သွားမလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းကို သေချာ မဆွေးနွေးဘဲနဲ့ လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ ညီလာခံကို တက်တဲ့ ပုံစံမျိုး ကျနော်တို့က မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီတခါ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ကတိကဝတ်က ရေရှည်မှာ သွားချင်တယ်။
ဥပမာ ခုနပြောသလိုပဲ ၂၁ ရာစု ပင်လုံဆိုတာက ညီလာခံတခု ညီလာခံ ဆိုလို့ရှိရင် စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ တက်ရမယ်။ ညီလာခံရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂ࿿ါ ပြည့်စုံစွာနဲ့ ကျင်းပတဲ့ ညီလာခံမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီလို အခင်းအကျင်းမျိုး ဆိုရင် တက်မှာပါ။ အဲဒီလို အခင်းအကျင်းမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ ညီလာခံ ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့က တက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အပစ်မရပ်သေးတဲ့ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အထဲမှာ အရေးကြီး ကိစ္စရပ် တခုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး မူဘောင် သုံးသပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့။ အဲဒီ ကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာပြောချင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေး မူဘောင်ကတော့ အစကနေ အဆုံး ဆွေးနွေးပြီးတဲ့ နောက်မှပဲ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ တပိုင်းစီ၊ တပိုင်းစီ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဥပမာ ကျနော်တို့ NCA နိဒါန်းပိုင်းမှာ မူလ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုခဲ့တာက နိုင်ငံတော်ကို ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ တိကျတဲ့ အဖြေတခုကို ကျနော်တို့ တောင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပြောတာက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးရအောင်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်က ပြန်စဉ်းစားတာက ကောင်းပြီ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ မူလ တောင်းဆိုထားတာက NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်။ ပူးတွဲ ဦးဆောင်ကော်မတီ ရှိလာမယ်။ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေ ရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့က မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပူးတွဲဦးဆောင်မှုလည်း မရှိတော့ဘူး။ သုံးပွင့်ဆိုင်လည်း မရနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီနိုင်ငံရေး မူဘောင်တခုလုံးမှာ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ စဉ်းစားစရာ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး မူဘောင်ဆိုတာက အားလုံး သေသေချာချာ ဆွေးနွေးပြီးမှ၊ တကယ် အချောသပ်ပြီးပြီဆိုမှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို သွားသင့်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အခုအချိန်မှာတော့ မပြီးခင် ပြန်သုံးသပ်နေတဲ့ အချိန်မှာပဲ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ ဒီပင်လုံ ညီလာခံကြီးကို တပြိုင်တည်း ကျင်းပနေတာဖြစ်တော့ အခက်အခဲတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကျနော်တို့ရဲ့ အမြင်ပါ။
မေး။ ။ ကိုယ့်ဘက်က ရပ်တည်ချက်တွေက အစိုးရအတွက် ပိုပြီးတော့ အခက်အခဲ ဖြစ်စေသလား။
ဖြေ။ ။ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်လို့ ပြောရတာ နိုင်ငံတနိုင်ငံအတွက် အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး။ အစိုးရလို့ ပြောလိုက်ရင် အကုန်လုံး ပါတယ်လို့ ကျနော်တို့က ဒီလိုပဲ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာကတော့ အဲဒီလိုမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ နောက်တခုကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်သူ ပိုလိုချင်သလဲလို့မေးရင် အတူတူပါပဲ။ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သွားမလဲဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ မတူညီတာပဲ။ သို့သော်လည်းပဲ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ပြောနေတာ က တန်းတူရေးပါ။ တန်းတူရေးနဲ့ ဆွေးနွေးကြမယ်။ တန်းတူရေးနဲ့ နေထိုင်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ကျနော်တို့က မြင်တယ်။ တန်းတူ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီငြိမ်းချမ်းရေးက မစစ်မှန်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ဘက်က ဒီလို အယူ အဆနဲ့ပဲ တိုင်းတာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကျနော်တို့မေးတဲ့အထဲမှာ မပါဘဲ ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ ဖြည့်စွက် ပြောချင်တာများ ရှိရင် ပြောပေးလို့ရပါတယ်။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေ အနေနဲ့ NCA ကို ဘာဖြစ်လို့ လက်မှတ် မထိုးသလဲလို့ တချို့လူထုတွေက မေးတာပေါ့။ တကယ်တမ်း လက်မှတ်ထိုးရေး၊ မထိုးရေးဆိုတာ တိုက်ရိုက် မေးခွန်းမေးရတဲ့ မေးခွန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့လည်း တိုက်ရိုက်ဖြေလို့ရတဲ့ အဖြေမရှိပါဘူး။ ဘယ်လို အနေအထား ရောက်ရင် လက်မှတ်ထိုးမယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ အခု အားလုံးသိထားတဲ့ UNFC က တင်ပြထားတဲ့ ၉ ချက်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဒီအချက်ပြည့်စုံရင် ကျနော်တို့ လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ အတိအကျ အစိုးရကို စာနဲ့ရော၊ နှုတ်နဲ့ရော အစည်းအဝေးတွေမှာ ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျနော်တို့ဟာ ရေရှည်ခိုင်မြဲမယ့် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးချင်တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ရေရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ ဆိုလို့ရှိရင် ရှေ့အလားအလာကို တချို့ဟာတွေ ကျနော်တို့ သေချာ ညှိနှိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ လက်မှတ်ထိုးချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူးလို့ မယူဆစေချင်ဘူး။ ဒီအနေအထား ရောက်အောင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
KIA ဗုိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (၁)
1:31 PM Htet Aung Kyaw No comments
18 January 2017 KIA ဗိုလ်ချုပ် ဂွန်မော် / ဧရာဝတီ
မေး။ ။ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တပ်မတော်ရဲ့ ထိုးစစ်တွေကြောင့် KIA ရဲ့ စစ်ရေးအရ အရေးပါတဲ့ ဂီးဒွန်၊ လိုင်ဖောင် စတဲ့ စခန်းတွေ အသိမ်းခံလိုက်ရတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ကလည်း စခန်းတချို့ကို တပ်မတော်က ထပ်သိမ်းလိုက် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ တပ်မတော်ကနေပြီးတော့မှ စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေ လုပ်နေတာကြာပါပြီ။ ၄ လ၊ ၅ လလောက် ရှိပါပြီ။ ကျနော်တို့တွေ တချို့စခန်းတွေလည်း လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ အတွက်ကတော့ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဒီစစ်ရေး ဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲဆိုတဲ့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက် ဖိအားပေးတဲ့ အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
မေး။ ။ ဒီလိုမျိုးဖိအားတွေ များလာတဲ့အခါကျတော့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ အနေနဲ့ ခုနကပြောတဲ့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တစုံတရာ ရလာပြီလား။
ဖြေ။ ။ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ ဗဟိုကော်မတီမှာ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ လိုအပ်လို့ရှိရင် ပါတီညီလာခံခေါ်ပြီး မကြာခင်မှာ ကျနော်တို့ ယတိပြတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ အနေအခြေအနေ ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ ထိုးစစ်ဆင် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတ ဦးထင်ကျော်တို့က စစ်ပွဲရပ်ဖို့ ကိစ္စကို ပြောဆိုတာ မရှိဘူး။ နှုတ်ဆိတ်နေတယ် ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်နေကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အစိုးရက ပြောသင့်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုလို့ နားလည်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရက မပြောတာကိုတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ မဝေဖန်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ အစိုးရကလည်း မပြောဘူးဆိုတော့ အစိုးရကလည်း ဒီတိုက်ပွဲတွေ အပေါ်မှာ အားပေးတယ်လို့ပဲ နားလည်ပါတယ်။
မေး။ ။ လောလောလတ်လတ် ဖြစ်သွားတဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့က မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် စစ်ဆင်ရေးမှာ MNDAA ၊ AA ၊ TNLA တို့နဲ့အတူ KIA လည်းပါခဲ့တယ်။ အဲဒီစစ်ဆင်ရေးကို ဘာကြောင့် ပါဝင်ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား။
ဖြေ။ ။ ဒီမြောက်ပိုင်းဒေသ စစ်ဆင်ရေးရဲ့ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ နာမည်က မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့လို့ ကျနော်တို့က ခေါ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုဆိုတာကတော့ TNLA ရယ်၊ AA ရယ်၊ ကိုးကန့် (MNDAA) ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ဒီမြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ အထဲမှာတော့ ကျနော်တို့ KIA တခုလုံး ပါဝင်တာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ KIA ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တချို့ဖြစ်တဲ့ တပ်မဟာ ၄ နဲ့ ၆ ကို ပါဝင်ဖို့ ခွင့်ပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ နယ်မြေချင်း စပ်ဆက်နေတယ်။ ပိုပြီး အရေးကြီးတာက ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာ ကျနော်တို့ မပါဝင်ဘူးဆိုရင် မဟာမိတ် အချင်းချင်းရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ လျော့ပါးနိုင်သလို မလိုလားအပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အရှုပ်အထွေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမှာစိုးလို့ ကျနော်တို့က မဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးမှ စစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပါဝင် လှုပ်ရှားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒါပေမယ့်လို့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေ ပြောနေကြ စကားရှိတာက နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ အဖြေရှာမယ်ပေါ့နော်။ ဆိုတော့ အခုလိုမျိုး လက်တွေ့တိုက်ပွဲနဲ့က ပြောင်းပြန် ဖြစ်မနေဘူးလား။
ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲတပွဲကိုပဲ ကြည့်ပြီး ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို အဓိပ္ပာယ် ထွက်ကောင်း ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေ အကြိမ်ကြိမ် လုပ်တာကတော့ စစ်ရေးအရ ဖိအားမပေးဖို့၊ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဥပမာ ဂီးဒွန်လို နေရာမျိုးကို ၂ လ၊ ၃ လ လောက်တိုက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကျနော်တို့ မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက နေရာ တနေရာကို ဝင်ပြီး တိုက်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီတနေရာကို ဝင်တိုက်တာကို ဥပမာ နိုဝင်ဘာ ၂၀ ကနေတိုက်တာ ၁၅ ရက်လောက်ပေါ့နော်။ ဒီ ၁၅ ရက်လောက် မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေက တနေရာမှာ ဝင်တိုက်တာကို အပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် အစိုးရတပ်က သာလွန်အင်အားနဲ့ လပေါင်းများစွာ တိုက်နေတာကိုလည်း ကျနော်တို့က ထည့်ပြီး စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနေရာတည်းမှာပဲ ကွက်ပြီး မှတ်ချက် မချဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မေး။ ။ အဲဒီတိုက်ပွဲနဲ့ အဆက်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် အစိုးရကရော၊ တပ်မတော်ဘက်ကရော မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကို အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူတွေလို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လို သဘောထားရှိပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါကိုတော့ ကျနော် ၂ ပိုင်းပြောချင်ပါတယ်။ အခုကတော့ ကျနော်တို့ နားလည်တာက အစိုးရက တရားဝင် အကြမ်းဖက်လို့ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အပါအဝင် နေရာတိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်လို့ ပြောဆို သုံးနှုန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဒုတိယ အချက်အနေနဲ့ကတော့ အကြမ်းဖက် ဆိုတာက ဒီလို အမည်နာမကို ကိုယ်ကြိုက်သလို ခေါ်ရုံနဲ့ အတည် ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ အကြမ်းဖက်တဲ့ အဖွဲ့ ဖြစ်သလား၊ မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာကတော့ ပြည်သူလူထုကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာ။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စံနှုန်း၊ စံထားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ကို ကချင်လူထု အပါအဝင် တခြားပြည်သူ လူထုက အကြမ်းဖက်လို့ မသတ်မှတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အကြမ်းဖက်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ KIO ကလည်း အကြမ်းဖက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး မလုပ်ပါဘူး။ ဒါကျနော်တို့ ရဲရဲကို အာမခံပါတယ်။
မေး။ ။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကအစ အကြမ်းဖမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူတွေလို့ သုံးစွဲ ပြောဆို နေတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ တပ်မတော်နဲ့ အဓိက ဆွေးနွေးနေရတဲ့ အခါကျတော့ ဒီစကားလုံး အသုံးအနှုန်းကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုပြီးတော့များ အလှမ်းကွာဝေး သွားစေမလား။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က ဦးအောင်ကြည် တို့နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ဒီကိစ္စ ကျနော်တို့ တင်ပြပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို အကြမ်းဖက်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က တရားဝင် ထုတ်ဖော်နေတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းကို ဆွေးနွေးပွဲတွေ လာဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒါအခက်အခဲ ဖြစ်စေပါတယ်။
မေး။ ။ UNFC က တင်ထားတဲ့ မူ ၈ ခုထဲက ပထမဆုံးအချက်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ကြေညာ ပေးဖို့ဆိုတာ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးကို ဆိုလိုတာလဲ။
ဖြေ။ ။ အဓိကကတော့ UNFC က တောင်းဆို ထားတာကတော့ အနည်းဆုံး UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေ အားလုံးကို အတူတကွ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအတူတကွ ပါဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလို့ရှိရင် လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း အစိုးရကနေပြီးတော့မှ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာပေးဖို့ နောက် ကျနော်တို့ EAOs (တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ) ဘက် ကနေပြီးတော့လည်း ၄၈ နာရီအတွင်းမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲကြောင်း ပြန်လည် ကြေညာမယ်ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက် ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရဘက်ကနေ ပြောတာကတော့ အဲဒီလို မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။ လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အဖွဲ့နဲ့ပဲ အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြောင်း ကြေညာနိုင်တယ်လို့ အဲဒီလိုပဲ မနေ့ကလည်း အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ ပြောတာ နှစ်ပိုင်းပေါ့။ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အားလုံးကို ပါဝင် ခွင့်ပေးပါ။ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ အတွက် အားလုံး ပါဝင် လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ တပြိုင်တည်း တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကြေညာပေးပါလို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက ဒါကို မလိုက်လျောနိုင်သေးတဲ့ အခါကျတော့ ဒီတနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ်မှာ လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့တွေရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေတာက အကျိုးစီးပွားတွေ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆိုပြီးတော့ ပြောနေကြတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး မေးလာ၊ ပြောလာရင် ဗိုလ်ချုပ်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြန်ပြောချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ အကျိုးစီးပွားလို့ ပြောတာက သိပ်ပြီးတော့ အခြေအမြစ် မရှိဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဥပမာ KIO မှာ ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ရန်ပုံငွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခွန်ကိစ္စတို့ ဘာတို့ အကုန်လုံးက ဌာနကနေ ကိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစုံတယောက်က နေပြီးတော့မှ အဓိက ချယ်လှယ်တာမျိုး မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ အကျိုးစီးပွားလို့ ပြောလိုက်ရင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားပဲ ရှိမှာပါ။ တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ အကျိုးစီးပွားတော့ မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ တရုတ်ပြည်ဘက်ကို ထွက်ပြေးရတာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ် ဘက်က ဒုက္ခသည်တွေကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် လုပ်ဆောင်တာတွေရှိပြီး လက်မခံဘူး။ ဆိုတော့ တရုတ်အစိုးရကိုရော KIO အနေနဲ့ ဒီကိစ္စတွေ ပြေလည်ဖို့ ဘယ်လိုတိုက်တွန်းလို့ ရမလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့က တရုတ်အစိုးရ ဆိုတာထက် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် အကြပ်အတည်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကျနော်တို့ လူထုကို တားလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကို ကာကွယ်ရမယ်။ ကိုယ့်အသက်ကို စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့က ဒီလိုမလွှဲ မရှောင်သာ အနေအထားမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကို ချဉ်းကပ်ပြီးမှ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ILLIBERAL DEMOCRACY IN AMERICA Posted by Fare...